IBM Swift Sandbox သည် Swift ကုဒ်ကိုရေးရန်ခွင့်ပြုသည် ငါက Mac ပါ
IBM Swift Sandbox သည်သင့်အား Swift code ကိုရေးရန်ခွင့်ပြုသည်
IBM က 'IBM Swift Sandbox' ဟုခေါ်သောဝက်ဘ်ဆိုက်ကိုမိတ်ဆက်ခြင်းဖြင့် Swift bandwagon တွင်ပူးပေါင်းခဲ့သည်။ ဤဝက်ဘ်ဆိုက်တွင်သင်လုပ်နိုင်သည် ဆွစ်ဖ်ကုဒ်၏လိုင်းများကိုရေးပါ ဘယ်ဘက်အပေါ်စာသားအယ်ဒီတာနှင့်နောက်ပိုင်းတွင် Linux ဆာဗာပေါ်က code ကို run ပါ, ရလဒ်ညာဘက်ကော်လံထဲမှာပေါ်လာဘယ်မှာ။ ဒါတွေအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ် Swift သည်ယခုအခါ open source ဖြစ်သည်အခုဘယ်မှာလဲ Linux ကို နှင့်ဆက်သွယ်သည် iOS ကို y OS X ကို.
ဤသည်၌ ဆောင်းပါး, Craig Federighi ကသူသည် Swift ကို open source ဘာသာစကားဖြင့်ဘာကြောင့်ရွေးချယ်ခဲ့ခြင်းအကြောင်းပြောဆိုသည်။ ယခုသင်သည် Swift ဘာသာစကားအပြင်စံစာကြည့်တိုက်များ၏လုပ်ဆောင်ချက်များကိုလည်းသုံးနိုင်သည် 'IBM Swift Sandbox'ထို့ကြောင့်ပုံသေနည်းများနှင့်အတူသင်္ချာဆိုင်ရာပြproblemနာတစ်ခုကိုရေးသားခြင်း (ဥပမာ - ကျွန်ုပ်တို့အားလုံး၏ပုံကိုပထမနေရာတွင်ထားသည့် Fibonacci လုပ်ဆောင်ချက်များဥပမာကဲ့သို့) သည် web application ၏နယ်ပယ်အတွင်းတွင်ရှိသည်။ အဆိုပါအယူအဆ app ကိုဆင်တူသည် Mac App Store မှ CodeRunnerတိမ်တိုက်ထဲ၌လုံးလုံးလျားလျားပြေးလွှားနိုင်သည်မှလွဲ။ ဒီလိုင်းတွေရဲ့အောက်မှာကျနော်တို့ Mac App Store မှာ CodeRunner2နဲ့ချိတ်ဆက်ထားတယ်။
ကျွန်တော် Swift နဲ့မြန်မြန်ဆန်ဆန်အကောင်အထည်ဖော်မှုကိုမြင်တော့မယ်ထင်တယ်၊ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ 'IBM Swift Sandbox' သင်လိုချင်သောအရာများစွာကျန်ရှိနေပါကသင်ယူခြင်းကိုစတင်ရန်အကောင်းဆုံးနေရာဖြစ်လိမ့်မည်။ စိတ်ဝင်စားစရာလည်းကောင်းတယ် IBM သည် Swift ကိုအစကတည်းကထောက်ပံ့ခဲ့သည်။ Apple နှင့် IBM တို့သည်မျှတစွာကျယ်ပြန့်သောစီးပွားရေးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုရှိပြီးဖြစ်သည် Mac များသည် IBM အတွက်ဘဝကိုပိုမိုလွယ်ကူစေသည်သို့မဟုတ်ပင်ဘယ်မှာ IBM က Apple Watch ကိုသူ့ရဲ့ ၀ န်ထမ်းတွေကိုပေးတယ်.
Fuentes [IBM က Swift Sandbox]
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - ငါက Mac ကပါ » Apple » NOTICIAS » IBM Swift Sandbox သည်သင့်အား Swift code ကိုရေးရန်ခွင့်ပြုသည်
iOS9အတွက်မေးလ်တွင်ဖိုင်များကိုမည်သို့ပူးတွဲရမည်နည်း